Nnennen Side High Speed ​​Press Manufacturers & Suppliers - China Kwụ Ọtọ Side High Speed ​​Press Factory
Nkọwapụta DAYA ogologo akụkụ okpukpu abụọ crank punch pịa VS Ndị ọzọ kwụ ọtọ akụkụ abụọ crank press Daya pịa Daya pịa: na ikpo okwu na nchekwa ngere, adaba maka ipigide mmezi na mgbanwe nke obi jụrụ, isi moto belt bụ rụrụ na mfe ịgbanwe, na-adaba adaba mmezi. Ọ dị nchebe ma na-adaba adaba. Ndị ọzọ na-pịa ndị ọzọ pịa: Enweghị mmezi ikpo okwu. Ipigide mmezi, nnọchi nke jụrụ mmanụ, omumezi ukpụhọde nke isi moto ...
Njirimara arụmọrụ 1. A na-eme etiti ahụ ka ọ bụrụ nnukwu ihe nkedo na nnukwu ihe jikọrọ ya, nke na-egbochi nsogbu mmeghe nke fuselage n'okpuru ibu, ma mata nhazi nke ngwaahịa ndị dị oke elu; 2. Ugboro abụọ axis center ndu, anọ ndu ndu na-eduzi dum ogologo, otú ọbụna eccentric ibu nwere ike ịnọgide na-enwe magburu onwe zọọ ziri ezi na ogologo ndụ nke ntụmadị; 3. A na-eji mmanu mmanye mmanye na mmanu mmanu mee ihe nke ihe n 'eme ihe di ala iji belata ...
Nkọwapụta Uru Uru slide ndu Uru 1: The slide okporo ígwè adopts "elu ugboro quenching" na "okporo ígwè egweri usoro": High ugboro quenching: ekweghị ekwe esịmde n'elu hrc48, Okporo ígwè egweri usoro: n'elu imecha nwere ike iru Ra0.4, na flatness dị ka elu dị ka 0.01mm / m2, nke n'ozuzu ya bụ 03mm / m2. Uru: obere uwe, oke nkenke, ogologo oge iji kwado nkenke ma melite ndụ ọrụ nke ọnwụ. Irighiri gia Advantage 2: Tur ...
Nnennen Side High Speed ​​Press N'ihi Motor Stator Ma Rotor (HHD Series)